Ụbọchị Debian 2021: Debian 11 Bullseye ewepụtara na ụbọchị Debian? | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 15/08/2021 00:11 | Emelitere ka 15/08/2021 00:34 | Nkesa, Noticias
Nyaahụ, 14 August 2021, ọ bụ maka ọtụtụ ndị hụrụ Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux n'ụwa nile, ụbọchị pụrụiche nke a na-eche kemgbe. A na -akpọ onye na -eme kwa afọ kwa afọ dị ka Ụbọchị Debian ma ọ bụ "Debian GNU / Linux Day".
Karịsịa, n'ihi na na nke a Ụbọchị Debian 2021 ọtụtụ nọ na -eche ọkwa ọkwa mwepụta ikpeazụ nke ụdị kwụsiri ike nke mbụ "Debian 11 Bullseye". Ee, ụnyaahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe nke ụbọchị, ewepụtara ụdị a tụrụ anya ya yana ISOs ya dị na ngalaba nke mbụ Ọrụ Debian. Ya mere: Anyị nwere "Debian 11 Bullseye" ịnwale, jiri ma nwee ọ!
Debian 11 Bullseye: Obere ileba anya na ịwụnye New Debian
Na mgbakwunye, anyị ga -ekerịta ụfọdụ akụkọ kacha ọhụrụ metụtara nke ekwuru ụbọchị mmemme y ntọhapụ nke ọhụrụ version.
Mana tupu ịbanye n'ụdị ozi a metụtara Ụbọchị Debian 2021 malite na 14 / 08 / 2021, dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga -ahapụ njikọ a gara aga metụtara post con "Debian 11 Bullseye" ebe anyị kwuburu banyere ya nwere ike ụbọchị mwepụta ikpeazụ. Yabụ na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ha nwere ike gụọ ya ngwa ngwa na ngwụcha ịgụ akwụkwọ a:
"Dị ka ozi gọọmentị na Wiki nke Biantù Debian, afọ a bụ afọ nke "Debian 11 Bullseye", ebe ọ bụ na, ndị a bụ isi ihe ngosi na mmepe na ntọhapụ nke nsụgharị a:
12-01-2021: Transition na mbụ kefriza.
12-02-2021: Nro kefriza.
12-03-2021: Kefriza siri ike.
17-07-2021: Total kefriza.
14-08-2021: Eleghara anya mwepụta ikpeazụ."
1 Ụbọchị Debian 2021: Ihe Ọhụrụ maka Debian GNU / Linux Day 2021
1.1 Enwerela Debian 11 Bullseye na Debian Day 2021?
1.2 Ozi gbasara ime mmemme ụbọchị Debian 2021
1.3 Ozi na -agbasa banyere mwepụta nke Debian 11 Bullseye
1.4 Ozi gọọmentị, akụkọ na mmelite gọọmentị na Debian GNU / Linux
Ụbọchị Debian 2021: Ihe Ọhụrụ maka Debian GNU / Linux Day 2021
Enwerela Debian 11 Bullseye na Debian Day 2021?
Ee, ụnyaahụ 14/08 ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na ngwụcha ụbọchị a tọhapụrụ ya. Dị ka ekwuru n'akwụkwọ ọhụrụ dị ụnyaahụ, na webụsaịtị nke Micro-ozi sitere na Project Debian na dịka enwere ike ịnabata ya na ISO dị Na nke na-esote njikọ.
Ozi gbasara ime mmemme ụbọchị Debian 2021
El Ụbọchị Debian bụ ọkwa ọkwa maka 14 / 08 / 2021, Ma n'ezie na onye ọ bụla n'afọ na ọ na-eme ememe na ọtụtụ dị nso ụbọchị n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, dị ka ị pụrụ ịhụ na ndị na-esonụ njikọ.
El Ụbọchị Debian ọ bụ n'ezie Ọgọst 16 ọ bụla n'afọ ọ bụla, ụbọchị ụbọchị Ọrụ Debian. Ebe ọ bụ na ụbọchị bụ a 16 / 08 / 1993, dị ka e kwuru na -esonụ njikọ.
Ọhụrụ ọ bụla kwụsiri ike nke "Debian 11 Bullseye" a ga -ahapụ ya naanị mgbe achọpụtaghị njehie ọzọ. Point e ruru ụnyaahụ ụnyaahụ, dị ka e dekọrọ na ndị na -esonụ njikọ.
Ozi na -agbasa banyere mwepụta nke Debian 11 Bullseye
23:40 – 14/08/2021: Debian 11 Bullseye ewepụtala: Chọọ akụkọ
23:31 – 14/08/2021: N'ihe banyere Debian 11 Bullseye, a na-akpọgharị ụlọ nchekwa ka ọ bụrụ oke nchekwa, yabụ ndị ọrụ ga-achọ imeghari faịlụ ndepụta ntọala APT ha na ntọala ya mgbe ọ na-eme nkwalite. Chọọ akụkọ
23:14 – 14/08/2021: Ọ bụrụ na sistemụ gị bụ Debian 9 (Stretch) ma ọ bụ na mbụ, biko soro ntuziaka dị na Ihe ngosi mwepụta nke Debian 10 iji kwalite na Debian 10 (Buster) mbụ wee nwee ike kwalite na Debian 11 Bullseye. Chọọ akụkọ
23:08 – 14/08/2021: Debian 11 Bullseye na -agbakọ na ebe nchekwa ego dị gị nso! Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere ọzọ, onyonyo CD dị ugbu a na ndị a njikọ. Chọọ akụkọ
Ozi gọọmentị, akụkọ na mmelite gọọmentị na Debian GNU / Linux
Ka ị bụrụ ihe kachasị ọhụrụ na Ọrụ Debian njikọ ndị a nwere ike nyocha ugboro ugboro:
Webụsaịtị gọọmentị nke DEBIAN Project
Akwụkwọ ndetu Debian 11 (Bullseye), 64-bit PC
Akụkọ kwa izu
Akụkọ na Spanish
Blọgụ bits sitere na DEBIAN
Ọrụ ozi igwe: Micronews
Ndepụta ọkwa Debian
Ndepụta ọkwa Debian-nche
Ndepụta akụkọ Debian
Na nkenke, nke a Ụbọchị Debian 2021 ụdị ọhụrụ a na-atụ anya ya kemgbe Ọrụ Debiankpọọ "Debian 11 Bullseye" ọ ga -adịrị naanị maka ndị ọrụ nwere mmasị na ndị nwere mmasị ibudata ya iji nwalee ya, jiri ya mee ihe ma nwee ọ enjoyụ ma ọ bụ kwuo ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ụbọchị Debian 2021: Debian 11 Bullseye ewepụtara na ụbọchị Debian?